Fumana ithebhulethi emnandi yeAlldocube X nge- $ 219 kuphela I-Androidsis
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo besithetha ngecwecwe elitsha elaliza kubona ukukhanya, iAlldocube X, ithebhulethi ebisinika izinto abanokuthi abanye abavelisi bazithande kodwa ngenxa yokuswela imfuno yentengiso, vele uvule iimveliso zolu hlobo . Ndithetha ngetafile yeAlldocube X, ithebhulethi ene I-Android Oreo 8.1 kunye nescreen se-2k Super AMOLED.
Imfuno yamacwecwe e-Android ilawulwa yi-Samsung kunye neLenovo, ke akukho lula ukufumana indawo kweli candelo ukuba awunayo inkxaso enkulu. Abafana abavela kwithebhulethi yeAlldocube, baphendukele kwiqonga lokubuyisa imali laseIndiegogo ukuze ukwazi ukwenza isindululo sakho esimnandi.
Ukuba siphakathi kwabokuqala ukubhalisela isibonelelo ukuze xa kusungulwa iprojekthi yokukhangela imali, siya kuba nakho ukuyibamba le thebhulethi nge $ 219 nje, $ 50 ngaphezulu kwexabiso layo eliqhelekileyo. Nge-8 ka-Agasti, eli phulo lenkxaso mali liza kuqala kwaye siya kuba neentsuku ezisi-8 zokuthatha ithuba lokunikezelwa.
2 Uyifumana njani itafile yeAlldocube X nge $ 219
Iscreen se-AMOLED esine-2k resolution, 2560 x 1600 pixels, kunye ne-10.000: 1 umahluko womlinganiso kunye nefomathi yesikrini se-16: 10. Ukongeza ineenombolo ezingama-300 zokuqaqamba okuphezulu kunye namachaphaza angama-288 nge-intshi nganye.
I-8176 GHz 6-core MediaTek MT2.1 processor kunye ne-IMG PowerVR GX6250 600 MHz yemizobo.
Isandi ngumenzi we-AKM ocutha ukugqwetha kwaye ubonelele ngesandi esikumgangatho ophezulu.
I-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina yangaphakathi iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-128 GB isebenzisa amakhadi e-MicroSD.
8 mpx ngaphambili nangemva kwekhamera.
I-8.000 mAh ibhetri esinokonwabela ngayo iiyure eziyi-8 zevidiyo. Ukongeza, ixhasa ukutshaja ngokukhawuleza ngezibuko le-USB-C, esivumela ukuba sinciphise ixesha lokutshaja kwesixhobo.
Uyifumana njani itafile yeAlldocube X nge $ 219
Ukufumana le cwecwe limnandi, inkampani isinika iindlela ezimbini.
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yemveliso iyafumaneka kwi-Indiegogo
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yomenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » Fumana icwecwe elimnandi leAlldocube X nge- $ 219 nje
Inqaku le-Honor 10 lisemthethweni: 6.95-intshi screen, Kirin 970 nangaphezulu